PSG Oo Heysata Kaliya 13 Xiddig Ka Hor Kulanka Habeen Danbe
Tababare Thomas Tuchel ayaa ka walwalsan in Paris Saint-Germain ay heysan doonto kaliya 13 xiddig kulanka ay habeen danbe la ciyaarayaan kooxda Nimes horyaalka Faransiiska sababo la xiriira dhaawacyo, ganaax iyo Korona Fayras.
Kooxda difaacaneysa horyaalka Faransiiska ayaa raadineysa inay gaarto guusheedii shanaad ee isku xigta marka ay u safrayaan garoonka Stade des Costieres.
Si kastaba, Tuchel ayaa xaqiijiyay shirkiisa jaraa’id ee maanta in tiro badan oo ciyaartoydiisa ah inay seegayaan kulanka habeen danbe ama inuu shaki weyn ku jiro.
Marquinhos, Marco Verratti, Julian Draxler, Thilo Kehrer, Juan Bernat iyo Mauro Icardi ayaa dhaawacyo ku maqan.
Angel di Maria iyo Layvin Kurzawa waxay ku maqan yihiin ganaax halka Ander Herrera uu ku dhacay cudurka Korona Fayras.
Dhanka kale saxiixa cusub Danilo Pereira iyo Colin Dagba ayaa u dhawaaday ciyaartoy laga helay Korona Fayras sidaasi darteed waa qasab inay baaris kale maraan maanta oo Khamiis ah.
Waxaa iyadana calaamad su’aal ay dulsaaran tahay taam ahaanshaha Neymar iyo Kylian Mbappe kuwaasoo ka soo laabtay kulamada heerka caalami, waana wax walaac ku haya Tuchel iyadoo Talaadada soo socota ay Champions League la ciyaarayaan Manchester United.
“Waa inaan taxadar ka muujino ciyaartoyda ka soo laabtay kulamada caalamiga ah sida Mbappe iyo Neymar. Malaha waxaan kaliya heysan doonaa berrii 11, 12 ama 13 ciyaaryahan.” ayuu yiri tababare Thomas Tuchel.
“Madax xanuun ayay noqon doontaa berri laakiin waa inaan kooxda ku riixno guusha ka hor inta aan wajihin Manchester United”
The 22 Finest Suggestions To Begin Dropping Weight